Sotroina misotro rano → Fisotroan-drano ny fantsakana • sotro fisotro rano
Manolotra mpisotro rano fisotro ho an'ny fanabeazana izahay, indostrian'ny HoReCa, fikarakarana ara-pahasalamana, trano, birao, tobim-panjakana, valan-javaboary, trano fanatanjahan-tena sy ny maro hafa.
Fiantohana kalitao rano fisotro no foto-kevitr'ireo andrim-panjakana maro sy mpamokatra rafitra manokana ampiasaina fanadiovan-drano.
Ny rano fisotro dia tsy tokony ho afaka amin'ny microorganisms rehetra sy ny microelement manimba ary tokony hanana tsiro tsara.
Rano fisotro avo lenta miantoka ny famolavolana, ny fananganana ary ny fampiasana ny famatsian-drano sy ny fananganana rano ao anaty trano na toerana an-tanàn-dehibe, ary hisorohana ny fihanaky ny rano, ny hafanana izay tsy tokony hihoatra ny 25 ° C.
Rano misotro rano
Raha toa ka ilaina ny fanomezana fidirana rano fisotro ho an'ny maro an'isa dia ilaina ny mandinika vahaolana maoderina sy azo antoka, toy ny loharano misotro rano.
Ireo zava-pisotro toy izany dia fitaovana fanadiovana sy mora ampiasaina ary manome rano ny hatsiaka na efitrano fandraisam-bahiny ary tonga lafatra ho an'ny habaka izay ampiasain'ny olona marobe. Io vahaolana io dia nampiasaina nandritra ny fotoana ela tany amin'ny firenena hafa ary tonga lafatra ho an'ny birao, sekoly, zavamaniry indostria, seranam-piaramanidina sy seranam-piaramanidina, i.e. na aiza na aiza misy ilana famatsiana rano fisotro ho an'ny vondron'olona maro kokoa.
Mifandraika amin'ny valan'aretina COVID-19 dia manontany tena isika hoe, amin'ny alàlan'ny torolàlana ny Sanepid ary amin'ny fikarakarana ny fahasalaman'ny mponina, mba hamahana ny olan'ny fanomezana fahafaham-po ny hetahetan'ny olona eny amin'ny toerana an-tanandehibe sy ny andrim-panjakana amin'ny fomba azo antoka.
Hitanisa ity pejy ity Tobim-pandrindrana tanana ary Ireo rafi-dratsy manjavozavo ho an'ny efitrano famafazana mampiasa ny fomba maina fog
Rehefa mitady fitaovana mora sy madio izahay, ary tsara kokoa ny tanana, dia ireo orinasa izay mamokatra fisotro sy loharano fisotro no tonga amintsika miaraka amin'ny vahaolana, ny fampiasana izay miantoka ny fahadiovana lehibe indrindra.
Rehefa misafidy loharano misotro ny lohataona na izany aza, misy zavatra vitsivitsy tokony hotsarovana
Heverinay fa, izany rano mandeha avy amin'ny paosintsika kalitao tena tsara izy io, izay azo hamaritana mora foana amin'ny alàlan'ny fandidiana fitsapana sahaza azy hatao amin'ny tobin'ny fahadiovana sy ny epidemiolojika akaiky indrindra. Raha hita fa ny antsika paompy rano dia manana kalitao avo lenta, fisotroana rano fisotro madio.
ireo mpisotro fantatra ihany koa fa mpitsangatsangana rano dia fitaovana mamela ny fampiasana rano madio sy mangatsiaka tsy misy filana lovia. Ny rano madio sy mahasalama azo alaina amin'ny fotoana rehetra, amin'ny habetsahana sy ho an'ny rehetra.
Fisotro rano sotro Azon'izy ireo atao amin'ny fomba mahomby amin'ny sekoly, ny akanin-jaza, toeram-piasana, birao ary ireo toerana hafa rehetra izay ilain'ny mpanjifa sy ny vahiny, ny mpianatra sy ny mpiasa matetika mba hamonoana ny hetahetany.
Rehefa mifidy ny loharano misotro rano mety, dia tokony harahinao tsy ny fisehoan'ny fitaovana ihany, fa koa amin'ny fiasa azy.
Ireo misotro zava-pisotro maimaim-poana dia hiasa tsara kokoa amin'ny toerana iray, ary mihantona eny amin'ny toerana hafa. Indraindray ny rafitry ny rano-rano tsy ilaina. Ny loharano misotro rano dia misy paompy fanampiny izay manamora ny famenoana e.g. tavoahangy. Ny loharano misotro rano dia azo ovaina miaraka amin'ny tongotra an-tongotra, bokotra na photocell iray. Ny fitaovana sasany dia amboarina sivana rano.
Ny tombony tsy azo isalasalana ny fisotroan-drano fisotroana dia ny fampifandraisana azy ireo amin'ny rafi-pamatsian-drano sy ny fampiasana rano mandeha, izay mahatonga ny olana amin'ny famoahana rano tavoahangy feno rano, ary ny fampiasana dia fahadiovana sy ekolojika, raha tsy mampiasa tavoahangy plastika.
Ny loharano misotro vy vita amin'ny vy, ny vovony mifangaro miaraka amin'ny bokotra varahina vita amin'ny nickel.
Ny takelaka eo alohan'ny / aoriana dia vita amin'ny vy corten na varahina misy coated vy na vy tsy misy vy. Vary vita vita amin'ny vy vita amin'ny galvanized.
Ny loharano misotro ihany koa dia tanteraka miaraka amin'ny marika haingon-tsipika laser mahazatra.
maoderina fironana amin'ny maritrano manery ny mpamokatra loharano fisotro izy ireo hamoaka tetikasa mifanaraka amin'ny fomba misy ary mampiasa fitaovana manokana sy ny endrika maoderina amin'ny vokariny. Ny tolotra dia ahitana vokatra roa miaraka amina endrika mahazatra ary koa ny endrika minimalist.
Spas rano fisotro dia natokana ho an'ireo toerana toa ny kianja, kianja filalaovana ary zaridaina ihany.
amin'izao fotoana izao loharano zaridaina Noho izany, izy ireo dia afaka manatanteraka ny fahombiazana tsy ny fiasa aestetika fotsiny, amin'ny fanaovana haingo ny habaka, fa afaka manome rano fisotro avo lenta ihany koa.
Modely sasany mpisotro natao ho an'ny biby koa izy ireo.
Ny fantson-drano fisotro dia manampy amin'ny fikarakarana ny tontolo voajanahary amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fako vokarina rehefa misotro rano misy tavoahangy na rehefa mampiasa amboara plastika.
Ny rano fisotro amin'ny tolotra dia tonga lafatra amin'ny efitrano mihidy ary koa ny any ivelany. Ireo fitaovana dia vita amin'ny fitaovana kalitao avo indrindra ary ny fananganana azy ireo dia ahafahan'ny fampiasana intuitive, hygienic ary malefaka ampiasaina.
Ny fitaovana sasany dia ahafahanao mahazo rano amin'ny mari-pana, ny hatsiaka, ny karbonina ary koa ny mafana. Vahaolana mety ho an'ny mpampiasa izay afaka manome mora ny mpiasa miditra amin'ny rano fisotro madio.
Pro-stream dispenser. Rano mangatsiaka, mafana sy mandsi. Jereo ny antsipiriany bebe kokoa eto
Ny loharano fisotroana rano mipoitra eny an-tanàn-dehibe dia mamela ny fampiroboroboana ny fiainana tontolo iainana sy mamolavola ny fahazarana misakafo ara-pahasalamana, indrindra rehefa momba ny fahadiovana sy matetika ny fampiasana rano fisotro madio.
Miasa ny loharano misotro rano, manohitra fahasimbana sy mora ampiasaina.
Ny loharano misotro rano sasany ampiasaina amin'ny habaka ivelany dia azo tanterahina mandritra ny taona izay noho ny fampiasana fantsona anti-freeze manokana.
Loharano rano fisotro maoderina - mora be ny loharano, ka mora ampiasaina azy ireo ny zaza sy ny antitra, misaotra ihany koa ny fanitsiana ny fisotroan-toaka amin'ny haavon'ny olona mampiasa ny fitaovana.
kojakoja amin'ny lohataona ranoloharano mivainganafanamboarana ny loharanom-baovaomety azo ve ny rano amin'ny paompy?na salama ve ny rano avy any amin'ilay loharanosivana ho an'ny misotro toakaloharano cascadeloharano zaridainaloharano mivainganavidin'ny loharano zaridainaloharano zaridaina ho an'ny ankizyloharano zaridaina lehibeloharano zaridaina ny fomba fanamboaranaloharano zaridainaloharano zaridaina kelyloharano maoderinaloharano zaridaina backlitmpanamboatra loharano zaridainasary loharano zaridainaloharano zaridainaloharano zaridainaloharano zaridainagripa ho an'ny mpisotro irayloharano zaridaina kelympamoaka tanànaady an-tanàn-dehibeloharano miniloharano maoderinapitnikimpitondra ranompisotrozava-pisotro ho an'ny ankizyzava-pisotro ho an'ny ankizy any an-tsekolyzava-pisotro ho an'ny olonazava-pisotro ho an'ny alikazava-pisotro ho an'ny sekolymisotro zava-pisotrozava-pisotro amin'ny valan-javaboarympisotro adypump pump pumploharano zaridaina masoandroRano mety masikafenon'ny rano fisotrorano fisotro any Poloninafisotro rano miadytakiana rano fisotrorano avy amin'ny lohataonamitete ny rano avy amin'ny mpisotroloharano ranorano fisotro ivelanysotro fisotro ranolohataonaloharano iray misotro ranoloharano zaridainaloharano eny an-jaridainalohataona ao am-pianaranaloharano ranoloharano misotro ranovidin'ny rano fisotro amin'ny lohataonafisotroan-drano fisotro rano any an-tsekoly